आज चुनावको दिन, मौसम कस्तो रहला ? मौसमविदहरुले दिए यस्तो सल्लाह | suryakhabar.com
Home पु.समाचार आज चुनावको दिन, मौसम कस्तो रहला ? मौसमविदहरुले दिए यस्तो सल्लाह
आज चुनावको दिन, मौसम कस्तो रहला ? मौसमविदहरुले दिए यस्तो सल्लाह
on: June 28, 2017 In: पु.समाचारTags: आज चुनावको दिन, मौसम कस्तो रहला ? मौसमविदहरुले दिए यस्तो सल्लाहNo Comments
काठमाण्डौ । सोमबार रातिदेखि नै देशभरी मनसुन फैलिए पनि मुसलधारे र लगातार वर्षाको संभावना कम भएको मौसमविद्हरुले अनुमान गरेका छन् । बुधबार पनि बिहानदेखि अपरान्हसम्म मौसम सफा रहने बताउँदै मौसमविद्ले दिउँसो दुई, तीन बजेसम्म मुलुकभर भारी वर्षाको संभावना नरहेको अनुमान गरेका छन् ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् बरुण पौडेलले ‘बिहीबारसम्म दिउँसोको समयमा भारी वर्षाको संभावना नरहेको’ बताए ।
‘सोमबार रातिदेखि देशैभर मनसुन फैलिए पनि बुधबार दिउँसो भारी वर्षाको संभावना देखिन्न,’ पौडेलले मंगलबार भने, ‘सूदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बुधवार अपरान्हदेखि हल्का वर्षा हुने देखिन्छ, अझै दुई, तीन दिन मुसलधारे वर्षाको संभावना न्यून छ।’
आज (बुधबार) प्रदेश नं १, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ।
बुधबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, सूदूरपश्चिमका तराईका जिल्ला, मध्यभागका तराई र पूर्वको जिल्लामा पनि दिउँसोको समयमा भन्दा मध्यान्हपछि वर्षा हुने महाशाखाका विश्लेषण छ। २९ जेठमा पूर्वको झापा हुँदै प्रवेश भएको मनसुन सोमवार ९१२ गते० मात्र सूदूरपश्चिम पुगेको हो। यसबीचमा खासै धेरै वर्षासमेत भएको छैन।
‘मुसलधारे वर्षा हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘देशैभर केही दिन यता रातको समयमा वर्षा भइरहेको छ, अझै त्यस्तै वर्षाको संभावना छ।’
Tags: आज चुनावको दिनमौसम कस्तो रहला ? मौसमविदहरुले दिए यस्तो सल्लाह
दोस्रो चरणको निर्बाचन आज हिान ७ बजेदेखी ५ बजेसम्म, परिचयपत्रबिना पनि मतदान गर्न सकिने
चुनावी मतदान प्रक्रिया सुरु, मतदाताहरु लाइनमा बस्दै